Uhlelo lokuzivumelanisa nezimo lokushintsha kwesimo sezulu lwethulwa eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uhlelo lokuzivumelanisa nokushintsha kwesimo sezulu lwethulwa eSpain
Ukukhuphuka kogu lolwandle Ungomunye wemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu amadolobha asogwini afana neLondon noma iLos Angeles esaba kakhulu. Lapho ubhekene nokwenyuka kwamazinga olwandle, yonke imisebenzi yezomnotho namakhaya ezigidi zabantu angagcwala ngokoqobo.
Ngalokhu, i-General Directorate of Sustainability of the Coast and the Sea yethule Isu Lokuzivumelanisa Nezimo Ogwini lwaseSpain Ekuguqukeni Kwesimo Sezulu. ISpain iyizwe elisengozini enkulu emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu futhi, uma unikezwa ukukhuphuka kolwandle, kufanele ithole izixazululo. Kuyini ukuguquguquka kwesimo sezulu sasogwini?
Isu Lokuzivumelanisa Nezimo Ogwini lwaseSpain Ekuguqukeni Kwesimo Sezulu
Lesi sinyathelo siqala ngenhloso yokwenza ukuxilongwa kwezingcuphe ezihambisana nokuguquka kwesimo sezulu ogwini. Lapho nje ubungozi obudalwe amadolobha asogwini sebuhlaziyiwe, kuzokwenziwa imizamo yokwamukela izindlela ezingenzeka zokulwa nokukhuphuka kwamazinga olwandle.
Ukukhuphuka kolwandle ngokungangabazeki umphumela omkhulu wokuguquka kwesimo sezulu okuthinta kakhulu amachibi, ngoba kusho ukulahleka kwendawo ngenxa yokwehla kogu. Ngaphezu kwalokho, lokhu kukhuphuka kwamazinga olwandle kubangela nokungena kosawoti emachwebeni nasemifuleni (ukulahlekelwa amanzi amaningi agciniwe), ukuguguleka kolwandle, ukulahleka ngqo kwemvelo ngenxa yokufudumala kwamanzi olwandle nokwanda kokuphindaphinda ukushuba kweziphepho.
Njengoba izindlela zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu ezisungulwe Esivumelwaneni saseParis zingakaqali ukuthela izithelo, iSpain kufanele ifune ezinye izindlela zokuzivumelanisa nezimo. Isu liphakamisa izinhlobo ezintathu zokungenelela ukunqanda le miphumela: ngokomzimba, kwezenhlalo nakwezikhungo. Lezo zesimo senhlalo zicacisiwe ekwakhiweni kwengqalasizinda noma ekusetshenzisweni kwezixazululo ezisuselwa kwimvelo, njengokuvuselelwa kwezindunduma noma amaxhaphozi. Izinyathelo zomphakathi zibhekisa ekuqeqeshweni noma ekushintshaneni kolwazi, kufaka phakathi ukwenziwa kwezinhlelo zokuxwayisa Okokugcina, lezo ezinesikhungo zithinta ukwenziwa kwezikhuthazo zentela noma imithethonqubo ekhuthaza ukusetshenziswa kogu ngendlela eqhubekayo
Enye yezinkinga ezinkulu ngaleli qhinga ukuthi ayinaso isibikezelo sezomnotho, kunalokho, lezi zinyathelo ezihlongozwayo kuzofanele zixhaswe nguMnyango Wezolimo Nemvelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Uhlelo lokuzivumelanisa nokushintsha kwesimo sezulu lwethulwa eSpain
Uthi bewazi...? Izintshisakalo owawungazi neze ngeplanethi yethu!